Maitiro ekutenderera vhidhiyo neVLC | Gadget nhau
Ignatius Room | | Updated on 08/01/2019 20:39 | Software, Tutorials
VLC ndeimwe yevatambi vakanakisa vatinayo nhasi kune chero chikuva, ingave nhare kana desktop. Kutenda kuVLC, tinogona kunakidzwa zvachose isina chero vhidhiyo uye odhiyo fomati, asi nekuwedzera, isu tinogona zvakare kugadzirisa mamwe ma parameter emavhidhiyo ekuvandudza kubereka kwavo.
Izvi zvinoshandurwa kugadzirisa vhidhiyo yekutamba kune zvatinoda, zvatinofarira kana zvido zvatinogona kuzviita zvechigarire zvakare kuburikidza neVLC, iyo inotidzivirira isu kuti titendeukire kune vechitatu-bato kunyorera izvo zvinotibvumidza isu kugadzirisa vhidhiyo, kunyorera izvo zvinowanzo dhura mari yakawanda. Pano tinokuratidza maitiro ekutenderera vhidhiyo neVLC.
Kutenderera vhidhiyo inogona kunge iri rimwe remabasa kana zvinodiwa izvo vashandisi vazhinji vakave nazvo kanopfuura kamwe chiitiko. Chokwadi pane kanopfuura kamwe chiitiko iwe wakambosangana nedambudziko kana uchiona yako reel nekuda kwekumhanyisa kurekodha, iyo kamera yatanga kushanda yakamira uye kwete yakatwasuka, saka kana tichiridza zvirimo, isu tinofanirwa kutenderera iyo smartphone, piritsi kana kuongorora, iyo yekupedzisira kashoma.
Kunyangwe iyo yekumira nharembozha vhidhiyo iri kuwedzera kuve inozivikanwa uye vamwe mapuratifomu senge IGTV uchida kuzviita chiyero, musika unoratidzika kunge wakazotanga kuona kuti kutora imwe nguva yakatwasuka hazviite chero pfungwa sezvo mamiriro arasika zvachose.
Kusiya iri dambudziko diki iro vashandisi vazhinji vanoita kunge vane kurekodha kurekodha, pazasi isu tinokuratidza maitiro atinogona kutenderera mavhidhiyo neVLC zvachose mahara kuburikidza nekombuta yedu, kubvira iyo vhezheni yefoni nhare panguva ino chete inotibvumidza isu kuti titambe zvemukati, usazvigadzirise.
1 Maitiro ekutenderera vhidhiyo neVLC
2 Maitiro ekuchengetedza vhidhiyo yakatenderedzwa / yakatenderedzwa neVLC
3 Tenderera Mavhidhiyo pa iPhone mahara
3.2 Tenderera & Flip Vhidhiyo
4 Tenderera mavhidhiyo pane Android mahara
4.1 Vhidhiyo Tenderera
4.2 Vhidhiyo Mupepeti: Tenderera, Glip, Unganidza ...
5 Matipi pakunyora mavhidhiyo
Chekutanga pane zvese, kana tisina kurodha pasi VLC yemidziyo yedu izvozvi, tinogona kubudikidza nechisungo ichi. Kana tangoisa, tinovhura vhidhiyo yatinoda kutenderera.
Tevere, tinoenda kumenyu Window.
Mukati me Window menyu, isu tinosarudza Vhidhiyo mhedzisiro.
Pazasi pachave nemashanu matabhu: Basic, Crop, Geometry, Ruvara uye zvakasiyana.
Kutenderera vhidhiyo, tinofanirwa kubaya pane iyo tabo Geometry.
Tevere, isu tinofanirwa kutarisa iro rekutanga bhokisi rakanzi Shanduko uye sarudza Tenderedza 90 degrees kuitira kuti vhidhiyo itenderedzwe nenzira kwayo. Kana vhidhiyo yacho yatenderedzwa, tichafanira kusarudza Shandura 270 degrees.
Vhezheni yeVLC yemidziyo yenhare haibvumidze isu kutenderera mavhidhiyo, zvisinei, zvese muiyo Play Store uye muApp Store isu yatinayo chatinacho dzakateedzana kunyorera izvo zvinotibvumidza isu kutenderera mavhidhiyo mahara kuti isu netsaona takanyora munzira isiriyo.
Maitiro ekuchengetedza vhidhiyo yakatenderedzwa / yakatenderedzwa neVLC
Zvese izvi zvakanaka kwazvo, asi chinonyanya kutifadza hakusi kungokwanisa kutamba mavhidhiyo ari panzvimbo yakanaka, asi kazhinji tinoda kuchengeta vhidhiyo pakombuta yedu kuti igone kuridzwa pane chero chinhu pasina kuita mutsipa kufamba.
Kuti tiite izvi, kana tangotenderedza vhidhiyo uye yave pachinzvimbo chatinoda, tinofanirwa tinya Faira> Shandura / kuburitsa. Isu tinosarudza iyo nzira kwatinoda kuchengeta iyo faira uye ndizvozvo. Kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, pese patinovhura vhidhiyo nyowani pane chero mudziyo, izvi zvinoratidzwa zvakatwasuka kana kumeso, zvichienderana nekuti vhidhiyo yatakanyora inofanira kuratidzwa sei.
Tenderera Mavhidhiyo pa iPhone mahara
iMovie ndeye Apple vhidhiyo mupepeti iyo iyo yaanotipa isu mahara kuburikidza neApp Store. Neichi chishandiso tinogona kutenderera mavhidhiyo nekukurumidza kubva kuchinhu chedu pasina kushandisa chero komputa.
Tenderera & Flip Vhidhiyo iri nyore application iyo inotibvumidza kutenderera mavhidhiyo emahara kubva kune yedu iOS kifaa, ingave iPhone kana iPad. Iko kushanda kwekushandisa kuri nyore kwazvo, sezvo isu tichifanira chete kusarudza vhidhiyo iyo yatinoda kutenderera uye sarudza yekupedzisira maitiro atinoda kuti ive nayo.
Tenderera mavhidhiyo pane Android mahara
Seizvo zita rayo rinoratidza, nekuda kweiyo yemahara Vhidhiyo Rotate application, tinogona kutenderedza kutarisisa kweiyo vhidhiyo kubva kune yedu Android terminal zvachose mahara. Kana tangotenderedza vhidhiyo, tinogona kuichengeta yakanangana nemagariro edu kana kuigovana kuburikidza nemagariro
Mukugadziri: ANDROID Pixels
Vhidhiyo Mupepeti: Tenderera, Glip, Unganidza ...
Kana isu tisingangoda chete kutenderedza edu aunofarira mavhidhiyo, asi isu zvakare tinoda kuigadzirisa nekucheka chikamu, kujoina mavhidhiyo akasiyana, kutamba chikamu mune inononoka kufamba…. Ichi chishandiso ndizvo zvatiri kutsvaga, sezvo ichitibvumidza kuita zvese izvi uye zvimwe zvakawanda. Izvo zvakare zvachose yemahara.
Vhidhiyo Mupepeti: Tenderera, Flip, Slow kufamba, Unganidza & zvimwe
Matipi pakunyora mavhidhiyo
Usati wanyora vhidhiyo, unofanirwa kupa chigadziro sekondi kuitira kuti gyroscope yemudziyo wedu iwane panzvimbo yatakaisa nharembozha kuti ziva kuinyora.
Kana isu tikatanga kurekodha zvichidzika kana yakatwasuka, zvisinei nekuti tinotenderedza mudziyo zvakadii, izvi hazvigadzirise kuti urikunyora sei vhidhiyo, saka zviri nani kumirira kwechipiri uye kutarisa kuti kutarisisa kwekushandisa kamera kwemudziyo wedu kwakarurama.
Kana tichida kuti mavhidhiyo edu atore mukana weiyo yepamusoro mhando iyo kamera yechigadzirwa inotipa, hatifanire kushandisa zoom yechigadzirwa, kunyanya kana isina Optical zoom (Zvishoma zvishoma zviteshi zvine izvi nhasi), sezvo zvikasadaro, iwo mufananidzo urikuremerwa wakawedzerwa, chakanakisa chatingaite, kana chiri muruoko rwedu, kuswedera padyo nechinhu kana chidzidzo chatiri kunyora.
Imwe zano yaunofanirwa kugara uchifunga mundangariro ndeye usanyora wakatarisana nezuva, sezvo zvinhu zviri mumufananidzo zvichasviba, zvichingoratidza chete silhouettes dzevanhu kana zvinhu zvatakanyora.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Tutorials » Maitiro ekutenderera vhidhiyo neVLC
Maitiro eku unzip rar rar